Bodo : Mendrika ny seho faha-30 taona
01/10/2018 admintriatra 0
Pao-tsatroka. Mendrika ny seho faha-30 taona nidiran’i Bodo teo amin’ny sehatry ny mozika nandritra ny seho tetsy amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy Fanatanjahantena Mahamasina. Ny antsasaky ny lapa no nanatanterahana ny fampisehoana. Efa maotina amin’ny ankapobeny …Tohiny
Efa tandindonin’ireo seho maimaimpoana, mandritra ny fampielezan-kevitra ve mpijery malagasy ? Saika vitsy tsy araka ny nantenain’ireo mpikarakara ny fahatongavan’ny mpijery tamin’ireo seho samihafa teto an-drenivohitra. Anisan’ireo tsy nahasarika olona nandritra ny seho nataony tetsy …Tohiny
Kudeta Anosy : Nampiteny ny gitarany i Teta
Anisan’ireo andrarezina. Nampiteny ny gitarany i Teta ny sabotsy alina teo tetsy amin’ny Kudeta Anosy. Nahafantarana ity mpanakanto avy any Ampanihy ity hatramin’izay, ny fahaizany mifehy sy mitrandraka ireo gadona nentin-drazana Mahafaly, amin’ny alalan’io zava-maneno …Tohiny
Depiote Hawel Mamod’Ali : Tsy voasazy, ary tsy voaheloka
Taorian’ny zava-nitranga tany Morondava, izay nahafatesana olona sy nahatonga korontana eraka ny tanàna. Afa-maina ny solombavambahoaka Hawel Mamod’Ali, rehefa avy nampanantsoin’ ny OMC tany an-toerana. Fantatra fa tsy nisy ny sazy, saingy noho izy niantso …Tohiny
Nandritra ny fitokanana ireo zava-bita teny Sabotsy Namehana, omaly no nilazan’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery fa “tsy maintsy tanteraka ny fanamby”. Io fotoana io moa dia nambarany fa fotoanan’ny fifanakalozana, fihainona no mampita ihany koa ny ...Tohiny